အိမ်တွင်ကယ်တင်ရန်နှင့်ဇန်နဝါရီလျှောစောက် | ကျော်လွှားရန်လှည့်ကွက်များ Bezzia
တောရက်စ် | 13/01/2022 10:02 | အဆင့်မြှင့်တင် 13/01/2022 10:21 | နေအိမ်
နာမည်ကြီး ဇန်စောင်း၊ ခက်ခက်ခဲခဲ ကျော်လွှားနိုင်ပုံရသည်။. ဒီဇင်ဘာလအတွက် အပိုကုန်ကျစရိတ်များအားလုံးအတွက် အခြေခံဝန်ဆောင်မှုများတွင် စျေးနှုန်းတိုးမြှင့်ပေးပါသည်။ ရင်ဆိုင်ရမည့် စရိတ်စကများ များပြားလာပြီး ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိပါက နောက်လများအတွင်း ပြည်တွင်းစီးပွားရေးကို လုံးလုံးလျားလျား ပစ်ပယ်သွားနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့်၊ အိမ်တွင်သိမ်းဆည်းရန် ဤနည်းလမ်းများသည် သင့်အသုံးစရိတ်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာစီစဉ်နိုင်စေရန်နှင့် စုဆောင်းငွေအချို့ဖြင့်ပင် ဇန်နဝါရီလကုန်ကျစရိတ်ကို ကျော်လွှားနိုင်စေမည့်အရာများဖြင့် သင့်အား ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ လှည့်ကွက်လေးတွေနဲ့ အလေ့အထတွေကို အပြောင်းအလဲလုပ်ပါ။ ၎င်းတို့သည် သင့်အား ကုန်ကျစရိတ်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဖြန့်ဝေနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရှည်လျားသည်။ ဒါမှ ဒီဇင်ဘာ လရဲ့ အပိုကုန်ကျစရိတ်တွေကို နှစ်စမှာ မရောက်ဖြစ်အောင် ရှောင်ပါ။
1.1 သင်၏အသုံးစရိတ်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။
1.2 တစ်ပတ်စာ အစားအသောက် စီစဉ်ပါ။
1.3 စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို သက်သာစေသည်။
ချွေတာရေးဟာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သင်ဟာ စီးပွားရေးအရရော ပညာရှင်ပီသစွာ လုပ်ဆောင်နေပါစေ၊ ကြိုမမြင်နိုင်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဟာ အချိန်မရွေး ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ မွေ့ယာသေးသေးလေးတစ်လုံး သိမ်းဆည်းခြင်းသည် စိတ်၏ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ စိတ်၏ ငြိမ်းချမ်းခြင်း နှင့် လုံခြုံခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဘယ်လောက်ပဲ ကယ်တင်နိုင်မယ်လို့ ထင်နေပါစေ။ လုပ်ခလစာများသည် အများအားဖြင့် လများ မည်မျှကြာကြာ တိုတောင်းပါသည်။. စားသုံးသူအလေ့အထတွင် သင်သည် သေးငယ်သော (သို့မဟုတ်) ကြီးမားသောငွေပမာဏကို ချွေတာနိုင်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် အရေးကြီးသောအရာဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိသော မလိုအပ်သော အသုံးစရိတ်များတွင် ငွေသည် အကြိမ်များစွာ လွတ်ထွက်သွားသည်။ ဒါကိုရှောင်ဖို့၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ အသုံးစရိတ်တွေက ဘာတွေလဲ။ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဒီနည်းက လတိုင်း ပိုက်ဆံ ဆုံးရှုံးတာကို ရှောင်လို့ရတယ်။ လစဉ်မပြောင်းလဲသော ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ငွေပေးချေမှုများအတွက် သတ်မှတ်ထားသော အသုံးစရိတ်များကို ချရေးပါ။ အကောင့်ကိုယူပြီး ငွေပမာဏကို ချရေးပါ၊ ထိုငွေသည် လစဉ်ကျသင့်သော အသုံးစရိတ်ဖြစ်သည်။
ယခု စျေးဝယ်လှည်းရှိ ကုန်ကျစရိတ်များကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်ပါ၊ ကတ်ဖြင့်ပေးချေပါက ပိုမိုတိကျသောကိန်းဂဏန်းတစ်ခုရရှိရန် ၎င်းကို အခွင့်ကောင်းယူပါ။ လုပ်ပြီးသား အသုံးစရိတ်တွေ မလိုအပ်ဘဲ ဘဏ်အကောင့်ကို ကြည့်နေတာဆိုတဲ့ အချက်ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး အသုံးချပါ။ သေချာတာကတော့ မင်းကို အံ့သြစေတယ်။ မလိုအပ်တဲ့အရာတွေအတွက် သင်သုံးတဲ့ငွေပမာဏခန့်မှန်းချက်ကောင်းကောင်းမရှိလို့သာ။
တစ်ပတ်စာ အစားအသောက် စီစဉ်ပါ။
အထူးသဖြင့် ဘာဝယ်ရမယ်ဆိုတာ ကောင်းကောင်းမစီစဉ်ထားတဲ့အခါ တခြားကောင်းတဲ့ ယူရိုငွေတွေက လစဉ်စျေးဝယ်ခြင်းတောင်းထဲကို ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။ တစ်ခုခု ယုတ္တိမရှိရင် ကတည်းက သင်အစာစားရန်စီစဉ်ထားသည်။ တစ်ပတ်အတွင်း ထိရောက်သောဝယ်ယူမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန် ခက်ခဲသည်။ အစားအစာကို ချွေတာခြင်း သို့မဟုတ် မိသားစုစားနပ်ရိက္ခာများ၏ အရည်အသွေးကို လျှော့ချခြင်းအကြောင်းမဟုတ်ပါ။ အကြောင်းဖြစ်သည် မီနူးကို စုစည်းပါ၊ panties ကိုစစ်ဆေးပြီး စာရင်းတစ်ခုလုပ်ပါ။ တရားမျှတပြီး လိုအပ်သောဝယ်ယူမှု။ ဤနည်းဖြင့် သင်သည် မလိုအပ်သောပစ္စည်းများသို့ ယူရိုများစွာရောက်ရှိသည့် ရက်သတ္တပတ်အတွင်း အသေးစားဝယ်ယူမှုများကိုလည်း ရှောင်ကြဉ်ပါ။
စွမ်းအင်သည် မတန်တဆဈေးဖြင့် နေ့တိုင်းပြောင်းလဲနေပြီး နေ့စဉ်နှင့်အမျှ မြင့်တက်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့် စွမ်းအင်အသုံးစရိတ် အများဆုံးနာရီများကို သိရှိရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ မီတာခကို သက်သာအောင် လုပ်နိုင်မယ်။. ၎င်းကို BOE တွင် နေ့တိုင်း ထုတ်ဝေနေသောကြောင့် အလွန်ရိုးရှင်းသောကြောင့် သင်သည် ဝဘ်ဆိုဒ်၏ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။ အနီရောင်Eléctrica de España. အမြင့်ဆုံးအချိန်များတွင် အပိုစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး သင့်ဓာတ်အားခကို လျှော့ချနိုင်သည်။
အားလပ်ရက်များပြီးနောက် ဆောင်းရာသီတွင် အရောင်းများရောက်ရှိလာပြီး ၎င်းတို့သည် မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပုံရပြီး လူတိုင်းသည် တရားဝင်စာရင်းအင်းများကို လိုက်နာရန် ၎င်းတို့၏ပျမ်းမျှအသုံးစရိတ်ကို သုံးစွဲရမည်ဖြစ်သည်။ သံသယဝင်စရာ တစ်ခုခုတော့ ထည့်ပေးတယ်။ ဇန်နဝါရီ တောင်စောင်းကို ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေမည့် မလိုအပ်သော အသုံးစရိတ်များ. သင်လိုအပ်သောအရာများကိုသာဝယ်ပါ။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာတွေကို သက်သာစေဖို့ ရောင်းအားအရမ်းကောင်းပါတယ်။ မရှိဘူးဆိုရင် စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး တစ်နှစ်တာရဲ့ ပထမလကို ဘဏ်မှာငွေနဲ့ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါတယ်။
ငွေသည် လူအများစုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ရှားပါးပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းကို မည်ကဲ့သို့ ကိုင်တွယ်ရမည်ကို မှန်ကန်စွာ လေ့လာရန်မှာ ၎င်း၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ပြဿနာမဖြစ်စေဘဲ ပြီးမြောက်နိုင်စေရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဒီလှည့်ကွက်တွေနဲ့ သင်လုပ်နိုင်တယ်။ လျှော့သုံးရန် သင်ယူပြီး သင်၏စုဆောင်းငွေကို တိုးမြင့်ပါ။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » နေအိမ် » အိမ်မှာ ကယ်တင်ပြီး ဇန်န၀ါရီစောင်းကို ကျော်လွှားဖို့ လှည့်ကွက်များ
မိုက်ခရိုဝေ့ဖြင့် မချက်ပြုတ်သင့်သော အစားအစာ ၅ မျိုး